Guddiga Doorashada oo soo saaray shuruudaha laga doonayo Xildhibaanada iyo musharaxiinta | Dhacdo
Home Wararka Maanta Guddiga Doorashada oo soo saaray shuruudaha laga doonayo Xildhibaanada iyo musharaxiinta
Guddiga Doorashada oo soo saaray shuruudaha laga doonayo Xildhibaanada iyo musharaxiinta
Guddiga Doorashada Madaxweynaha ayaa caawa shaaciyay shuruudaha laga doonayo musharaxiinta u taagan jegada Madaxweynaha Somaliya, Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka iyo dhammaanba ka qaybgalayaasha.
Xildhibaan Maxamed Ibraahim Macalimuu oo ka tirsan Guddiga Doorashada Madaxweynaha ayaa sheegay inuu jiro habraac uu guddigu dejiyay, taasoo ay tahay sida uu yiri in la raaco.
“Waxaa jira habraac la dejiyay oo ay tahay in la raaco, taasoo Guddiga Doorashada Isku-dhafka ah ee Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Somaliya ay diyaariyeen.” Ayuu yiri Maxamed Ibraahim Macalimuu oo ka barbar hadlayay Gudoomiyaha Guddiga Doorashada Madaxweynaha, Senator Cabdikhani Geelle Maxamed.
Macalimuu ayaa yiri “Waa in loo hoggaansamo awaamiirta ciidamada masuulka ka ah amniga, Ciidamada Soomaaliyeed iyo kuwa ATMIS ayaa ka shaqaynaya amniga, awaamiirta ciidamada meel kastoo ay jooggaana waa in loo hoggaansamaa. Waxaa mamnuuc ka ah goobta doorashada hub, haba yaraatee wax hub ah oo la ogolanayo in la keeno goobta doorashada ma jirto. Waxaa sidoo kale mamnuuc ka ah goobta doorashada wax lacag ah in lala yimaado, waxaa kaloo mamnuuc ka ah aaladaha elektaroonikada, sida teleefoon, computer, ipad iyo waxyaabaha muuqaalka & codkaba lagu duubo in ay dadku la soo galaan goobta, waxaana loo qorsheeyay in la dhigo meelo uu guddiga u qorsheeyay. Qalabka muuqaalka iyo cod duubayaasha waxaa loo ogolyahay oo keliya dadka ku shaqada leh, sida Warbaahinta.”
Maclimuu ayaa intaasi ku daray “Waxaa sidoo kale gudaha Teendhada Afisyooni ka reeban in laga sameeyo olole doorasho, marka codeynta doorashada bilaabato, ka dib wax olole doorasho ah oo laga dhex samayn karo, haba yaraatee teendhada gudaheeda ma jiraan, sida guddiga uu go’aamiyay. Waxaa goobta doorashada imaan kara, dadka ay magacyadoodu yaallaan albaabada laga soo galo oo la caddeeyay oo saddex albaab ah, waana inuu qofka aqoonsi sharci ah haystaa, marka magaciisa la yiraahdo, si loo hubiyo, waa inuu qofka aqoonsi haystaa.”
Muqdisho ayaa waxaa caawa ka bilaabanaya bandow socon doono 9:00pm fiidnimo ee caawa illaa 6:00am subaxnimo ee maalinta Isniinta.
Previous articleWararkii ugu dambeeyay Doorashada Madaxweynaha
Next articleDeni oo arrinta doorashada kala hadlay Qoorqoor (SAWIRRO)